ट्युसन पढ्न घरबाट हिँडेका २ बालक सम्पर्कविहीन ! शेयर गरी खोज्न सहयोग गरौं… – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/ट्युसन पढ्न घरबाट हिँडेका २ बालक सम्पर्कविहीन ! शेयर गरी खोज्न सहयोग गरौं…
वीरगन्ज, २६ पाैष । पर्साकाे सदरमुकाम वीरगन्जबाट शनिबार विहान ९ बजेदेखि दुई जना बालक आफ्नाे घर परिवारकाे सम्पर्कमा आएका छैनन् । वीरगन्जका हाेटेल व्यवसायीका छाेरासहित दुई बालक शनिबार विहानबाट सम्पर्कविहीन रहेकाे परिवनरजनले बताएका छन् ।
उनीहरु दुई जना ट्युसनका लागि घरबाट गएका र त्यसपछि सम्पर्कमा नआएकाे प्रणेश शर्माका पिता दिपेश शर्माले बताए । हराएका बालकहरु कक्षा ६ मा अध्यनरत रहेकाे शिवेष कलवारका पिता जगरनाथ कलवारले बताए । जगरनाथ कलवार हाेटेल तथा जग्गा व्यवसायी समेत हुन् । ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
अब बेलायतको नँया भाइरस नेपालमा पनि, पहिले भन्दा झनै ठुलो खतरा, सबैलाई यस्तो अनुरोध New Corona Virus
के काठमाडौंमा संकटकाल लागेकै हो त? जताततै सुरक्षाकर्मी तैनाथ!